मनोरञ्जन Archives - NepalPana
एघार वर्षीया न्यौपानेले गरिन् कमाल, लिटिल आईकनमा फस्ट रनरअप
काठमाडौं । एपेक्स लाईफ स्कूलकी जिज्ञासा न्यौपानेले ‘नेपाल लिटिल आईकन २०१७’ मा फस्ट रनरअपको ताज पहिरिएकी छिन् । काठमाडौंको राष्ट्रिय नाचघरमा शुक्रबार भएको फिनालेमा ११ वर्षीया न्यौपानेले ताजसहित विभिन्न उपाधि र पुरस्कार पाएकी छिन् । ‘नेपाल लिटिल आईकन २०१७’को सातौँ सिजनमा राजधानीका ४२ स्कूलले प्रतिस्पर्धा […]
नायिका अरूणिमा लम्सालले पनि पतिलाई छाडिन्, अमेरिकामा डिभोर्स
बाल्टिमोर। अमेरिका बस्दै आएकी अभिनेत्री अरूणिमा लम्सालले डिभोर्स गरेकी छन् । उनले पति अमित अर्यालसँगको १२ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई एक साताअघि टुंग्याएको अरूणिमा निकट एक फिल्मकर्मीले पुष्टि गरेका छन्। हाल अरूणिमा आफ्नी छोरी र बाबुआमाका साथमा बस्न थालेकी छन्। ती फिल्मकर्मीका अनुसार, अरुणिमा र पति […]
पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनीको ठूलो पोल खुल्यो, यसरी गरेकी रहेछिन संघर्ष
सनी लिओनले बलिउडमा आफ्नो संघर्षबारे अभिनेत्री नेहा धुपियालाई सुनाएकी छिन् । सनीले सुरुवातीका दिनमा आफूसँग स्टेज सेयर गर्न कोही बलिउडकर्मीले पनि नमान्ने गरेको दुःख स्मरण गरेकी छिन् । ‘म कुनै कार्यक्रममा गएँ भने मान्छेहरू म को हुँ, कहाँबाट आएँ भनेर कानेखुसी गर्थे । कतिपयले मेरो […]
नेपाल आइडलका बुद्ध, प्रताप र निशानलाई किन दिइयो उच्च सुरक्षा ?
नेपाल आइडलमा उत्कृष्ट चारसम्मको यात्रा तय गरेका सागर आलेमगरका लागि शुक्रबार साँझ नमीठो क्षण सावित भएको छ । यो एक चरणमात्रै पार गरेको भए उनी घटीमा पनि १० लाख रुपैयाँ पुरस्कारको हकवाला बन्थे । उच्च सुरक्षाका साथ एपीवान एचडी टेलिजिभन टोलीसहित चार महिनापछि परिवारसँग भेट […]
नायिका वर्षा राउतका पिता एमालेबाट चुनाव लड्दै
काठमाडौं । नायिका वर्षा राउतका पिता सुरेश बहादुर राउत नेकपा एमालेका तर्फबाट महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेदवार बनेका छन् । प्रदेश नम्बर दुईमा असोज २ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा राउत अहिले आफ्नो एजेण्डा लिएर जनताको घरदैलोमा भोट माग्दै व्यस्त छन् । […]
‘कोशी, महाकाली, टनकपुरसँगै नैतिकता बिक्यो ओली बा! जाबो एउटा कलेज किन नबेच्ने ?’
काठमाडौं । नेपाली हाँस्यव्यंग्य क्षेत्रको पहिलो पंक्तिमा आउँने नाम हो माग्ने बुढो अर्थात केदार घिमिरे । लामोसमय पछि तनग्रिएका केदारले आफ्नो फेसबुकमार्फत अहिले अनसनरत डा गोविन्द केसीको समर्थन गर्दै केपी ओलीका नाममा यस्तो स्टाटस लेखे (जस्ताको तस्तै): केपी बा , मनमोहन कलेज बेच्देउ …..| एक […]
एमालेको गीत गाउने गायक बद्री पंगेनी पक्राउ, अब के हुन्छ कारवाही ?
काठमाडौं । चर्चित लोकगायक बद्री पंगेनी मंगलबार राति बाँसबारीबाट पक्राउ परेका छन् । पंगेनी नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हुन् भने भर्खरैको चुनावमा एमालेको लागि चुनावी गीत पनि गाएका थिए । महाराजगञ्ज प्रहरीले पंगेनीसहित ११ जनालाई बाँसबारीको जुवाखालबाट राति छापा मारी पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ […]
तीजको मुखैमा दीपाश्रीले एक्कासी को सँग गरिन विहे ?
काठमाडौं । निर्देशक दिपाश्री निरौलाले नायक संजोग कोइरालासँग विवाह गरेकी छिन् । एक तीज गीतको भिडियोमा दिपा र संजोगको विवाहको दृश्य खिचिएको हो । मंगलबार बत्तीसपुतलीको राम मन्दिरमा तीज गीतको छायाँकन गरियो । ‘बहिनीको भिनाजु’ बोलको गीतमा शोभा थापाको स्वर, प्रशान्त पौडेलको लय तथा शब्द […]
तीजमा लिलाको यस्तो लिला, बेलायतीहरु हेरेको हेरेकै (भिडियो सहित)
काठमाडौँ, ३ साउन । पात्रोहरुमा जब जब चाडपर्वहरु नजिकिन थाल्छन् तब श्रृजनशील मनहरु त्यस चाडवाडसँग सम्बन्धित रहेर नयाँ नयाँ श्रृजना तयार गर्न तर्फ अग्रसर हुने गर्दछन् । विशेष गरी नेपाली हिन्दु नारीहरुको महान पर्व तीजको अवसरमा भने सबै भन्दा बढी नै गित संगीतहरु आउँने गर्दछन् […]